Kulimale abanye abafundi abangama-52 kwenye ingozi yebhasi – LIVE Express
Sekuphinde kwalimala abanye futhi abafundi abangama-52 kwenye futhi ingozi yebhasi eyenzeke ngoLwesihlanu eThekwini, emgwaqeni onguthelawayeka, u-N2, eManzimtoti.
Ngokombiko wabosizo lokuqala, abakwa-ER24, bathi bafike endaweni yesigameko bathola iningi lezingane, ezilinganiselwa eminyakeni eyi-7 kanye neyishumi nanye ubudala, zithole ukulimala okunatheni kanye nemihuzukwana. Abekho okubikwe ukuthi bashonile noma abalimale kanzima.
“Ibhasi eligingqikile litholakale lilele ngohlangothi eceleni komgwaqo. Abosizo lokuqala bathole iningi lezingane ezilimele zingaphandle kwebhasi. Kukholakala ukuthi basizanile ukuze baphume ebhasini,” kubika abakwa-ER24.
Baqhube bathi ithimba lezokucinywa komlilo kanye nokutakula kudingeke ukuba lisebenzise amathulizi akhethekile ukuphakamisa ibhasi ukuze kuqinisekiswe ukuthi azikho izingane ezicindezeleke ngaphansi kwalo.
“Abosizo lokuqala bathuthe izingane ezingama-52 kanye nabadala abayi-8 endaweni yesehlakalo beya ezibhedlela ezehlukene. Okungenani babili abathole ukulimala okunzima,” kuqhuba abakwa-ER24.
Lena kube yingozi yesibili yokugingqika kwebhasi ligcwele abafundi njengoba elinye ligingqike emgwaqeni u-R603, eMbumbulu, KwaZulu Natali, ngawo uLwesihlanu. Nakhona kulimale abafundi abangamashumi amahlanu (50) kanti abekho okubikwe ukuthi balimale kanzima noma bashonile.
Uhulumeni uthi sekumi ngomumo ngokhetho
4 July 2016 | Staff Reporter |